Ingxaki "ngeDatha eNkulu" | Martech Zone
Ingxaki "ngeDatha enkulu"
NgoLwesithathu, Aprili 9, 2014 NgoMgqibelo, uJanuwari 14, 2017 Douglas Karr
Elinye lawona magama athandwayo abonakala ngathi ayavela kuyo yonke indawo yetekhnoloji kule mihla idatha enkulu. Ndicinga ukuba eli shishini lenza kakubi ngokusetyenziswa gwenxa kunye nomfanekiso ongachanekanga obonisa eyona nto yenzekayo.
Idatha enkulu ligama eliyintsingiselo, okanye ibinzana lokubamba, elisetyenziselwa ukuchaza umthamo omkhulu wazo zombini idatha ehleliweyo nengacwangciswanga enkulu kangangokuba kunzima ukuqhubekeka usebenzisa isiseko sedatha kunye neenkqubo zesoftware. Ngoku ka IWebopedia
Ingxaki kukuba idatha enkulu ayisiyiyo kuphela database enkulu. Idatha enkulu ngokusisiseko yinkcazo enamacala amabini. Ingxaki kukuba iinkampani azilwi nje neenkcukacha ezinkulu, zilwa nesantya sedatha. Imijelo yedatha emikhulu iza ngexesha-lokwenyani ekufuneka liqhelekile kwaye liboniswe ngendlela ebonelela ngohlalutyo lwento eyenzekayo ngokuhamba kwexesha.
Ndiyakholelwa ukuba umfanekiso ochanekileyo unokuba idatha yokusasaza. Idatha yokusasaza inazo zombini izithembiso zokufumana ulwazi oluza kuthengiswa ngabathengisi, kunye Ixesha elilungile, ezihamba kwaye ukuxela kwangaphambili Uhlalutyo olunokubonelela abathengisi ngamathuba okulungisa isicwangciso sabo sokwandisa iziphumo. Iinkqubo kufuneka ziqhelanise, zigcine, zibonakalise kwaye ziqikelele kuthi ukuba siza kwenza imali kwimithombo yolwazi enkulu ekhoyo.
Musa ukukhohliswa yintengiso uthetha ungqonge idatha enkulu. Izisombululo sele zikhona ukuqhubekeka nomthamo omkhulu wedatha. Ukuthinta idatha yokusasaza yile nto siyifuna ngokwenene.
tags: idatha enkuluidatha yokusasaza
Uthando Nomtshato-Inguqulelo ye-Arhente
ITransera: Uhlalutyo lokuzibandakanya kwabaThengi kumaZiko oNxibelelwano
Epreli 9, 2014 ngo-4: 45 PM
Ndivumelana ngokupheleleyo nenkcazo yakho kunye nendlela "idatha enkulu" ibe ligama elishushu le-buzz. Bendinencoko ngale ntsasa nomntu endisebenza naye malunga "namagama abuzz."
Ingxaki kukuba, ngokusetyenziswa ngokugqithisileyo, ujongela phantsi injongo yokwenyani nentsingiselo emva kwayo de uninzi oluyivileyo neluyisebenzisileyo aluyiqondi ncam. Izinto ezifanayo zenzeke nge "cloud computing" kwaye uluhlu luyaqhubeka.
Epreli 11, 2014 ngo-9: 12 PM
Ngokuqinisekileyo ukufunda okuhle. Ibinolwazi kakhulu Doug, enkosi ngokwabelana!.
Epreli 14, 2014 ngo-3: 06 PM
Inqaku elihle Doug. Ukucofa ustrimisho lwedatha ngundoqo! Ukudibanisa idatha esuka kwinkqubo yangaphakathi kunye nemithombo yangaphandle, ukuyidibanisa ngexesha lokwenyani, ukucoca idatha, mhlawumbi wenze ukudibanisa okungaqondakaliyo kwaye emva koko uhambise ulwazi, izilumkiso kunye nezaziso zokuyenza isebenze yinto enhle. Iinkampani ezinokuhambisa intengiso yazo kwixesha lokwenyani ziya kuba nenzuzo enkulu. Inkampani inokuqalisa ukusebenzisa idatha yokusasaza ukufumana ukuphumelela ngokukhawuleza ngokwenza i-10-15% bump ekubandakanyekeni, kodwa ngokukhawuleza baya kuyifumanisa ineenzuzo ezincedisayo kwimveliso yabo, ukuthengisa, ukuthumela, ukuzaliseka, njl. Oku kube ngamava ethu. .